जब अाफ्नै भाउजुलाइ बिर्य काेचाइयाे! - Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » जब अाफ्नै भाउजुलाइ बिर्य काेचाइयाे!
जब अाफ्नै भाउजुलाइ बिर्य काेचाइयाे!
मेरो लिङ्ग त्यति ठूलो र लामो छैन । ६ इन्च लामो, गोलाइ होला त्यस्तै ४ इन्च जति । तैपनि म आफ्नो ‘फकिङ्ग स्टामिना’को विषयमा गर्व गर्छु । आजसम्म मैले जम्मा ३ जना केटिहरुसँग सेक्स गरेको छु । ती तिनै जनाले मलाई यस विषयमा खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् । एकपटक मसँग सेक्स भएपछि फेरि पनि सबन्ध राख्ने चाहना सबैमा पाएको छु । बिचरा, एकजना भाउजुलाई चाहिँ अर्ग्याज्मको ’boutमा केही थाहै रहेनछ । बिहे गरेको ५ वर्षमा त्यस’bout थाहै नपाई कसरी चल्यो होला उनको सेक्स लाईफ, अचम्म लाग्छ । दाइको ताल रहेछ २-४ मिनेट हल्लियो, स्खलन भइहाल्ने, त्यसपछि मस्ताराम निन्द्रामा । फेरि गरौं न भन्दा झर्कने, कति चाहिँदो रहेछ यो आइमाईलाई भनेर गाली गर्ने ।
दाई विदेश गएपछि ‘राजाको भोटे कुकुर फुक्यो’ भएको रहेछ भाउजुलाई । भन्न नसक्नु, त्यो अर्को कुरा । कुनै न कुनै बहानाले मसँग बोल्न सहयोग माग्न आइरहने उनी । म त्यति रसिलो हँसिमजाक गर्ने स्वभाव नभएको मान्छे । मेरो पेशाको कारण पनि त्यस्तो गर्न अलि नमिल्ने, भलादमी पल्टनु पर्ने म । तैपनि उनी मसँग केहि न केहि बहानामा नजिक हुन चाहिरहेको मैले बुझें । मलाई पनि के थियो र । अन्म्यारिड ठिटो, परिआएमा जे होला भन्ने अठोट गरें । हुँदा हुँदा मध्यराततिर पनि उनको मिस्कल आउन थाल्यो । फोनमा कुरा त्यस्तै हुने, “जाडो भो ? सिरकभित्रबाट बोलेको, नाङ्गै सुतिरा’को छु, आउनु सुत्न, खै उता सर्नु है म पनि सँगै सुत्छु, फेरि चकचक गर्न मन लाग्दो हो, कस्तो गाह्रो भइरा’को छ मलाई त ….. ” यस्तै त हुन् हाम्रो वार्तालापको केहि अंश । एक्लाएक्लै भएको बेला यस्ता कुराकानी हुन थालेपछि यसलाई वास्तविकतामा उतार्ने सल्लाह भयो एकदिन । सल्लाह अनुसार शुक्रवार मेरो छुट्टी भएपछि हामी जिल्ला सदरमुकाम जाने भयौं । केहि पर जंगलको छेउमा उनलाई पर्खिएँ । उनी आएपछि हामी हुइँकियौं धुलेबाटो बाइकमा । शहर पुग्दा रात परिसकेको थियो । कसैले देख्लान् कि भन्ने ठूलो चिन्ता थियो हामीमा । कसैले देखे होलान् बाल मतलब । चिनेको कसैसँग जम्काभेट चाहिँ भएन । लजमा बसेको त्यो दिन जापानमा सुनामी आएको र त्यसले विध्वंश मच्चाएको समाचार टि.भी.मा आइरहेको थियो, म संझन्छु अझै । घर, कार, इत्यादि पानीमा तैरिदैं बग्दै थिए टि.भी.को स्क्रीनमा । म भने मेरै कल्पनाको धुनमा मस्त भएर बग्दै थिएँ । खाना खाइन्जेल हाम्रो खासै बोलचाल भएन । हामी अलग अलग बेडमा बसेर टि.भी. हेर्दै रह्यौं । खाना खाईसकेपछि भने सुत्नका लागि तरखर भयो । जाडो मौसम भएकोले थप सिरक मगाउने हो कि भनिन् भाउजुले । “पख्नु न भाउजु, अहिले दुवै सिरक एकै बेडमा भइहाल्छ नि, किन चिन्ता गर्नु भएको जाडोको”, मैले ठट्टा गर्दै भनें । उनले पछि बताए अनुसार त्यतिन्जेलसम्म हामीबीच सेक्स नहुने रहेछ भन्ने सोचेकि थिइन् रे उनले । तर त्यस्तो मौकामा चौका नहानेर के को भद्रा हेरेर बसिन्थ्यो र । खाना खाएपछि दुवैजना एउटै बेडमा घुस्रियौं सिरक खापेर । आफ्नै हातमा भएको माल, त्यै पनि सारा रात हाम्रो साथ थियो । त्यसैले हतार गर्नुपर्ने कुरै थिएन । बिस्तार बिस्तार गफैगफको लयसँगै मेरो हात मात्तिदै जाँदो थियो । कसरी हामीबीच यस्तो न्यानो संबन्धको विकास हुनपुग्यो, कुरो कहाँबाट टेढिन थाल्यो र हामी यहाँसम्म आइपुग्यौं भन्ने सुक्ष्म विश्लेषण भयो । कुराकानीसँगै उनको शरीरभरि मेरो हात दौडिन शुरु भइसकेको थियो । अति मायालु पाराले मैले उनको शीरदेखि पाउसम्म चुम्दै लगें । उनले पनि साथ दिंदै मेरो सबै अंगको चुम्बन लिइन् । लुगाहरु क्रमश: फुकालिंदै जाँदा थिए । अन्तमा हामी सर्वाङ्ग भयौं । मेरो हात उनको स्तन खेलाउन व्यस्त थियो भने उनको हात मेरो लिङ्ग खेलाउनमा ।
हाम्रो जिब्रोहरु एक अर्कामा लठ्ठारिदै थिए, ओंठ के थिए होलान्, चकलेट झैं चुसिदै थिए एक अर्काको । अब लास्टमा त्यै हो, खोपी खेल्ने पालो । बिस्तारै साइडबाट नै मेरो लिङ्गले घर्षण दिएको, भाउजुको स्वास बढ्न थाल्यो । निकैबेर त्यसो गरेपछि उनको केहि लागेनछ, मुखले भन्न नसके नि हातले तानेर मलाई माथी चढ्न संकेत गरेपछि मैले नि कुरो त बुझ्नैपर्यो । “कति भयो भाउजु दाई विदेश जानु भा’को?” मैले निधार चुम्दै सोधें । “अब आउने वैशाखमा २ वर्ष हुन्छ । किन र?” प्रतिप्रश्न उनको । “यत्रो समय मन लाग्दैन त भाउजु?” “लाग्छ नि, लागेर के गर्नु र । बौलाएर हिंड्न नहुने ।” हल्का लज्जालु हाँसोसाथ उनले यति के भनिथिन्, मलाई उग्र आवेग बढेर आयो । “भाउजु, कति दिन तड्पेर बस्नुहुन्छ ? आज म तपाईंको त्यो प्यासी चाहनालाई भित्रैदेखि मेटाइदिन्छु । यत्रो वर्षदेखि जमेर बसेको तपाईंको प्यासलाई लाभासरि म बाहिर निकालिदिन्छु, ल भाउजु ?” तातो तातो सास उनको कान नजिक छर्दै भावनामा बग्दै मैले भनें । उनले पनि “हुन्छ” भन्दै हातले मेरो ढाड सुमसुम्याउन थालिन् । मलाई अरु भन्दा नि यति लामो समय उनको श्रीमान् उनलाई छाडेर परदेशिनुले उनीमा कति चाहना दबेर बसेको होला र आज तीनै चाहनाहरु भुल्कासरि उम्लिएर पोखिंदै छन् भन्ने संझदा अति नै इमोशन बढेको महसुस भयो । त्यै भएर मैले ढिला नगरी उनको प्यासी अंगमा मेरो फनफनाएको कोब्रा सुलुत्त पसाएँ र बेस्सरी ठेलें । उनी “आइया” भन्दै दोब्रिइन् । शायद, यतिका वर्षसम्म सेक्स नगरेकोले उनको योनी साँघुरो भइसकेको थियो होला । तर केहि बेरमा उनको योनीबाट ह्वालह्वाल्ती पानी बग्न थालेपछि आनन्दबाहेक त्यहाँ केहि रहेन । आनन्दले गदगद भई भाउजुका आँखा मस्त टोलाएको देख्दा मैले उनको लागि केहि दिंदैछु भन्ने सम्झेर ममा केको बल आयो आयो, खैंचेर छिटो छिटो उफ्रन थालें म । भाउजु पनि एक्कासी तलबाट चाक उठाएर बल गर्न लाग्नुभो । अनि उनको सास भित्रतिर तानियो । मुखबाट अनेक थरि आवाज निस्कन थाल्यो । मैले अझ रफ्तार बढाएँ । ५-६ मिनेटसम्म उहि तेज रफ्तार कायम राखेपछि मेरो स्खलन भयो, भाउजुको त अघि नै भइसकेछ । केहिबेर सुस्ताएपछि भाउजुले मलाई अँगालेर किस खानु भो र भन्नुभो, “के भएको होला आज मलाई, यस्तो त कहिले नि भएको थिएन त ।” “के भो भाउजु?” मैले सोधें । हल्का लज्जालु अनि अलि अलि कामेको स्वरमा भनिन्, “के हो के हो, कहाँबाट चिलाएर आन्द्राभुँडी नै आएजस्तो भयो । यस्तो आनन्द त कहिले नि भएको थिएन । म त छक्कै परें लौ ।” “हो र भन्या ?” मैले थोरै आश्चर्य मान्दै सोधें, त्यसभन्दा बढ्ता त आफ्नो पुरुषार्थमा गदगद थिएँ म । कुरै कुरामा उनले दाईसँग सेक्स गरे पनि कहिले नि त्यस्तो फिलिङ नभएको बताएपछि म पनि छक्क परें । बिचरी भाउजुलाई यत्रो वर्ष सेक्स भन्ने चीज केवल छोरामान्छेको लागि मात्र चरमआनन्द प्राप्त गर्ने विषयवस्तु हो भन्ने बुझाइ रहेछ । छोरीमान्छेले त केहिबेर थापिदियो, थोरबहुत आनन्द लियो, त्यति नै होला भन्ने रहेछ । अर्ग्याज्म अर्थात चरमोत्कर्ष कुन चरीको नाम हो थाहा नै रहेनछ ।
त्यस रात जम्मा ३ पटक मात्र सेक्स भयो हामीबीच, बेलुकी, मध्यरातमा र बिहानीपख । त्यसपछि त के थियो र, एकपटक बीचको पर्खाल भत्किसकेपछि ओहोरदोहोर गर्न के को बाधा हुन्थ्यो र । उनको घरमै सुत्ने कोठामा सुटुक्क गयो राति, उनको प्यास बुझायो, राति नै फर्कियो । त्यो मध्यराततिर केही कसैको डर त्रास पनि नलागेको मलाई, के को उन्माद हो । मेरो पनि चाहना मेटिने, उनको पनि प्यास मेटिने । दुनियाँले लुकी लुकी गर्ने, अनि हामीलाई चाहिँ गर्न हुँदैन भनेर सिकाउने । बेला बेला मनको राग शान्त पार्दैमा के नै बिग्रन्छ र ? गतिछाडेर हिड्न पो हुँदैन त । सभ्य तरिकाले गरिने सुरक्षित सेक्सलाई कसैले नकार्न मिल्दैन । कि कसो त ?
bhauju chikeko, bhauju chikeko katha, bhauju lai chikeko, जब अाफ्नै भाउजुलाइ बिर्य काेचाइयाे, भाउजुलाइ
Puti Chilaye Pachi
घाँसको भारीमाथी जबानी लुट्दा